မအလမြေးသေလား? တပ်တွင်းပြောင်းမှာလားနှင့်NUG ဝန်ကြီးများသတိထားရမည့်လူအချို့ – Myanmar Media
မအလမြေးဟာ အာဏာသိမ်းချိန် မွေးပါတယ်။ ထိုင်းကိုသွားပါတယ်။ သူ့မြေးရောဂါကPatent ductus arteriosus (PDA) လို့ခေါ်ပါတယ်။ နှလုံးကထွက်တဲ့ သွေးကြောနဲ့ အဆုတ်ကိုသွားတဲ့ သွေးကြောက ပုံမှန်မှာ သီးခြားရှိရမှာကို ရှိမနေဘဲ ဆက်နေတာပါ။
ခွဲတာအောင်မြင်ပါတယ်။ မသေပါဘူး။ မဆဲနဲ့နော်။ အမှန်အတိုင်းပြောပြတာ။ စာရေးသူ ဒီလောက်သိရင် ကွီးဖြိုးကိုသတ်ရင် မအလမြေးမနဲ့ သမီးကို တရားဥပဒေအရ ပြင်းထန်စွာ မအလအရေးယူခံရမယ်လို့ ပြောထားတာကို မအလယုံမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုအတွင်းရေးက ဘယ်သူသာ သိနိုင်လဲဆိုတာ မအလသိပါတယ်။
နောက်တပ်တွင်းမှာ ပြောင်းတာက ဘာမှမထူးဆန်းပါ။ ဟိုလေချုပ်က အသက်ပြည့်လို့ပါ။သူ့ထက်ငယ်တဲ့လူ သူခိုင်းတာကို ခေါင်းမရှိဘဲ လုပ်မယ့် နွားတွေကို ရာထူးတိုးပေးတာပါ။
ဒါပေမယ့် ရာထူးတိုးလာသူများက ခေါင်းမရှိလို့ တိုက်တိုင်းရှုံးဖြစ်နေပါတယ်။ တပ်ရင်းမှူးတွေက ရဟတ်ယဉ်ပစ်ကူပေးမှ ထွက်တိုက်မယ် ဟိုဟာလုပ်မှ ထွက်တိုက်မယ်ဆိုတာ စဖြစ်လာနေပါပြီ။ အချို့က လူမရှိရင် ထွက်မတိုက်ဘူးဆိုတာလဲ ဖြစ်လာနေပါပြီ။
ဒါက အပြောမဟုတ်ဘဲ လက်တွေ့ပါ။ နောက်ထောက်ပို့ကိုလဲ လေကြောင်းကို ပိုအားကိုးလာနေရပါပြီ။ ဖိအားများလာရင် လူတွေရဲ့ စိတ်သဘောအရ စိတ်ရောဂါဖြစ်လာပြီး တပ်တွင်းမှာ အချင်းချင်းသတ်ဖြတ်မှုတွေ ဖြစ်လာမှာပါ။ ယခုက စစ်သားတွေတင်မဟုတ်ဘဲ သူတို့မိသားစုပါ မလုံခြုံသလို ဖြစ်လာနေပါပြီ။
နေပြည်တော်က လောလောဆယ်မှာ လုံခြုံနေပေမယ့် နောက်ပိုင်းနေပြည်တော်လဲ လာမှာပါ။ နောက်သူအားသာတဲ့ ရဟတ်ယဉ်ကို နိုင်တဲ့အရာတွေ ပေါ်လာတာတွေ့ခဲ့ရအပြီး လေတပ်ကလဲ ဘုရားစတလာပါပြီ။ နောက်မှအသေးစိတ်ရေးပါ့မယ်။
ကျန်တာက NUG ဝန်ကြီးတွေသိအောင်ပါ။ ၈၈ က နာမည်ပျက်စေတဲ့ ပါပီမလိုဟာမျိုးတွေပါဂျောင်လူသတ်ပွဲတွေနဲ့ မအလသူပုန်တပ်က ကျောင်းသားတွေကို နာမည်ဖျက်ခဲ့တာပါ။
လုပ်သွားတာက စစ်ထောက်လှမ်းရေးရဲ့ တန်ပြန်ထောက်လှမ်းရေးက ကျောင်းသားအယောင်ဆောင်သူတွေပါ။ သူတို့တွေထဲက အချို့ဟာ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ နေနေကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့စာရင်းကို အတိအကျသိသူက ခင်ညွန့်သာပါ။ သူ့ထံသာ တိုက်ရိုက်သတင်းပို့ရလို့ပါ။
အဆိုပါလူတွေထဲကအချို့က ယခု ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ထဲမှာပါသလို အချို့ကလဲသတင်းထောက်၊ အချို့ကလဲ DASSK ဖောင်းထု ယခု NUG ဖောင်းထုကြသူများ ဖြစ်နေကြပါပြီ။
သူတို့ထဲက အချို့ဟာ NUG ကို လေထဲကနေ ဟိုဟာလုပ်လိုက်ပါ ဒီဟာလုပ်လိုက်ပါအော်နေပေမယ့် မိမိအောက်ကလူ မအလစစ်တပ်ကအဖမ်းခံရနိုင်အောင် သတင်းပေါက်ကြားမှု ရှိခဲ့သူပါ။ ယခုလဲ NUG ဝန်ကြီးကို အသံဖမ်းသွားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ထိိပ်တန်းလျှို့ဝှက်ချက်တွေပါ။
ဒီလူတွေကို ဖြစ်နိုင်ရင် ရှောင်ပါ။ တော်လှန်ရေးမှာ DASSK ကသူမ ရှေ့နေတွေကိုမှာတာက အချင်းချင်း စည်းလုံးကြပါ။ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ပါဆိုတာပါ။သူမက မတိုက်ပါနဲ့ ဘာညာမပြောပါ။ မိမိဝန်ကြီးဌာနကို ဦးစားပေးပါ။
အချင်းချင်းလေးစားပါ။ ယခုခေတ်မှာ လူငယ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ သူတို့ကို အသုံးချပါ။ သတင်းလုံခြုံရေးကို အလွန့်အလွန်ဂရုစိုက်ပါ။ မိမိလုပ်နေတဲ့ PRF စီမံကိန်းကိုသာ သေချာလုပ်ပြီး ငွေရအောင်လုပ်ပါ။ ဒါကသာ လက်နက်ဝယ်ဖို့ သေချာပါတယ်လို့ ပြောပါရစေ။
Tagsမအလမြေးသေလား? တပ်တွင်းပြောင်းမှာလားနှင့်NUG ဝန်ကြီးများသတိထားရမည့် လူအချို့